धनाढ्यको सूचीमा विनोद चौधरीकाे स्थान खस्कियो,विश्वकै अर्बपतिमा अमेजन मालिक जेफ बेजोस – khabarmala.com
अर्थतन्त्र ताजा समाचार प्रोफाईल स्टोरी
धनाढ्यको सूचीमा विनोद चौधरीकाे स्थान खस्कियो,विश्वकै अर्बपतिमा अमेजन मालिक जेफ बेजोस
Newportalmala २६ चैत्र २०७७, बिहीबार ०३:१२	No Comments
काठमाडौं : फोर्ब्सको अर्बपति सूचीमा रहेका एक मात्र नेपाली उद्योगपति विनोद चौधरीको सम्पत्ति यसपटक खस्किएको छ । कोभिड-१९ महामारीले उनको सम्पत्तिमा उल्लेख्य वृद्धि हुननसक्दा उनको स्थान खस्किएको हो । फोर्ब्सले सार्वजनिक गरेको धानाढ्यहरूको ४५औं वार्षिक सूची अनुसार चौधरी २१४१ स्थानमा छन् । पोहोर उनी १५१३ स्थानमा थिए । तर, गत वर्ष पनि उनी १३४९ स्थानबाट खस्किएकै थिए ।
दुई वर्ष लगातार उनको वार्षिक धन १.४ अर्ब अमेरिकी डलर छ । सन् २०१९ मा उनको धन बढेर १.७ अर्ब डलर पुगेको थियो । सन् २०१७ बाट उनको सम्पत्ति बढ्न थालेको थियो । ती वर्ष लगातार सम्पत्ति चौधरीले बढाउँदै गइरहेका थिए । तर दुई वर्षयता उनको अर्बपति सूचीमा स्थान खस्किदो छ । ६५ वर्षे चौधरी सिजी कर्प ग्लोबलका सञ्‍चालक हुन् । नेपालमा उनको नबिल बैंक र सिजी फुडमा ठुलो लगानी छ । सन् २०१५ मा फोर्ब्स एसिया म्यागजिनको कभर पेजमा झुल्किएका चौधरीले परोपकारितालाई आफ्नो सफलताको श्रेय मानेको बताएका थिए ।
उद्योगपति चौधरीले सन् २०१३ मा पहिलोपटक फर्ब्सको विश्वका अर्बपतिहरूको सूचीमा प्रवेश गरेका थिए । उनले फोर्ब्सको सूचीमा प्रवेश लिँदा उनको धन एक अर्ब अमेरिकी डलर थियो । सन् २०१५ सम्ममा उनले आफ्नो धन १.३ अर्ब पुर्‍याइसकेका थिए । भुकम्प र नाकाबन्दी खेपेको वर्ष २०१६ मा उनको धन घट्यो । जसकारण उनको धन १.१ अर्ब डलरमा खुम्चिन पुग्यो । तर, त्यसपछिका वर्षहरूमा उनले धन आर्जन बढाउँदै गए । उनको राजनीतिमा सक्रियाता समेत बढ्दै गयो । विनोद चौधरी प्रतिनिधी सभामा नेपाली कांग्रेसका संसद् समेत हुन् ।
विश्वकै धनीमा बेजोस
विश्वकै अर्बपतिमा अमेजन मालिक जेफ बेजोस घोषित भएका छन् । यस वर्ष बेजोसको कूल धन १७७ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको छ । गतवर्ष पनि उनी पहिलो स्थानमै थिए । कार उत्पादक टेस्ला कम्पनीका मालिक इलोन मस्क धनाढ्य सूचीको दोस्रो स्थानमा छन् । मस्कको सम्पत्ति १५१ बिलियन डलर छ ।
सूचीको तेस्रो नम्बरमा पेरिसका लक्जरी वस्तु उत्पादक धनाढ्य बर्नान्ड आर्नोल्ट छन् । माइक्रोसफ्ट मालिक बिल गेट्स चौंथो स्थानमा छन् भने फेसबुक संस्थापक मार्क जुकरबर्ग ९७ बिलियन डलरसहित पाँचौ स्थानमा छन् । वारेन बफेट छैठौ, ल्यारी एलिसन सातौं, गुगल मालिक ल्यारी पेज आठौं, गुगलको मातृ कम्पनी अल्फाबेट इंक सर्जी ब्रिन नवौं र भारतीय धनाढ्य मुकेश अम्बानी ८४.४ बिलियन डलरसहित दशौं स्थानमा छन् । अम्बानी एसियाकै धनी व्यक्ति हुन् । फोर्ब्सको ३५ औं वार्षिक सूचीमा ४९३ जना नयाँ अर्बपति थपिएका छन् । उनीहरूमध्ये २१० जना चीन र हङकङका छन् ।
Previous Previous post: पत्रकार महासंघ चुनाव : कहाँ कसले जित्यो ? देशभर प्रेश यूनियनको पक्षमा परिणाम
Next Next post: चारमन्त्रिको सांसद र मन्त्रिपद खुस्कियो
नेपालमा सोमबार थपिए ९,२४७ संक्रमित, २१४ जनाको मृत्यु २६ चैत्र २०७७, बिहीबार ०३:१२
We have to serve the country in times of crises २६ चैत्र २०७७, बिहीबार ०३:१२
इजरायल गाजा युद्धले अन्तर्राष्ट्रिय ध्यान तान्दै, विश्वका ठुला राष्ट्रहरु विभाजित २६ चैत्र २०७७, बिहीबार ०३:१२
नेपाल कोरोनाबाट एकै दिन एक सय ४५ को मृत्यु, सात हजार तीन सय ६८ मा संक्रमण २६ चैत्र २०७७, बिहीबार ०३:१२
खोप लगाएका व्यक्तिलाई किन भईरहेको छ कोरोना संक्रमण? २६ चैत्र २०७७, बिहीबार ०३:१२
राजदुत नियूक्तिः ओरालो लागेको कुटनीतिक २६ चैत्र २०७७, बिहीबार ०३:१२